Miyuu Lionel Messi qorsheynayaa inuu Carruurtiisa ku daro da’yarta Kooxda PSG? – Gool FM
(Paris) 02 Sebt 2021. Lionel Messi kaliya ma uusan bilaabin cutub cusub oo xirfaddiisa ciyaareed isagoo u dhaqaaqay Kooxda Paris Saint-Germain, laakiin wuxuu qorsheynayaa inuu carruurtiisa ku daro akadeemiga Paris.
Sida uu daabacay Wargeyska L’Equipe, Messi ayaa ka diiwaan galiyay Wiilashiisa Thiago iyo Mateo Kooxda dhallinyarada PSG, isagoo xitaa soo jeediyay in Messi uu falka sameeyay isaga laftiisu ka hor inta uusan ku biirin xulka qaranka Argentina.
Thiago Messi ayaa u ciyaari doono midkood xiddigaha da’doodu ka hooseyso 10-ka ama 9-ka sano, halka Mateo uu ku biiri doono kooxda da’doodu ka yar tahay 7-sano jirrada ee PSG.
Si kastaba ha noqotee, Messi ayaa qorsheystay inuu wiilashiisa ku daro akadeemiga Kooxdiisa PSG, laakiin weli si rasmi ah looguma dhawaaqin, inkastoo Wargeyska L’Equipe uu daabacay in Messi uu carruurtiisa mar hore ka diiwaan geliyey kooxda da’yarta Paris.
Waa maxay waxa ay markaan muhiimadda ugu weyn siinayso Kooxda Manchester City?